Mitemo Mitsva yaVaMugabe Younza Mutauro Munyika
Nyanzvi munyaya dzehupfumi, dzayambira kuti nyika ingwarire sezvo hurumende yaita zvechimbi chimbi pabhiri remutemo we Indigenisation and Economic Empowerment Bill.
Bhiri iri rakatambirwa nedare reseneti neChipiri uye ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuti rive mutemo. Mutemo uyu uchaita kuti hurumende ikwanise kutora zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana, hupfumi huri mumakambani asiri ezvizvarwa zveZimbabwe zvechitema.
Vamwe vana muzvinabhizimisi, vanoti vari kutyirawo kuti chimbichimbi iyi, inogona kuita kuti nyika itarisane nedambudziko rakaitika apo hurumende yakaunza mutemo mutsva wekubvuta minda kubva kuvachena, izvo zviri kuita kuti nyika itarisane nedambudziko rekushaya kudya kwakakwana.
Gurukota rinoona nezvekupa vatema hupfumi, Va Paul Mangwana, vanoti mutemo uyu uchaita kuti vanhu vatema, avo vanga vakadzvanyirirwa, vawanewo hupfumi nehupenyu huri nani.
VaTapiwa Mashakada ndivo mumiriri we Hatfield muparamende, muMDC inotungamirwa naVa Morgan Tsvangirai.
Mutori wenhau we Studio 7, Carole Gombakomba, aita hurukuro na VaMashakada, avo vanoti bato ravo rakagara rashora bhiri iri, uye dare reseneti ranga risina masimba ekushandura zvido zve ZANU-PF zviri mubhiri iri.
Ukuwo bazi rehurumende rinoona nezvekufambiswa kwemabasa nekusimudzirwa kwehupfumi, rinoti riri kuparura hurongwa hwehupfumi hutsva. Hurongwa uhu hunozivikanwa nerekuti Zimbabwe Economic Development Strategy, huchaitwa kwemakore mashanu.
Munyori mukuru muhofisi yezvekusimudzirwa kwehupfumi, Amai Judith Kateera, vaudza nhengo dzeparamende, madzishe uye magavhuna kuti hurongwa uhu hwakanangana nekuvandudza hupfumi hwenyika.
Asi mutauriri wenyaya dzehupfumi muMDC, VaTapiwa Mashakada, vanoti hurumende inongouya nehurongwa hwehupfumi, asi hunozongoita chin’ai pasina anohutevedzera.
Vamwe mubazi rezvekufambiswa kwehupfumi vanoti zvichiri kunetsa kuti vaite hurongwa hwavo, sezvo pari zvino vakuru vemauto, mapurisa pamwe nevasori, vari ivo vakabata matomu munyaya dzehupfumi pasi peJoint Operation Command.
VaProsper Chitambara ndivo Chief Economist weLabour and Economic Development Research Institute.
Mutori wenhau we Studio 7 Blessing Zulu aita hurukuro naVaChitambara ndokutanga nekuvabvunza kuti vanoona hurongwa uhu huchibudirira here.